Show All Most Popular Snack Burger, Sandwich & Pizza Pasta European Salad One Potion Fried Rice Main Dish Soup Coffee Items Milkshakes Frappe Italian Soda Mocktails Smoothies Iced Drink Seasonal Fresh Juice
Burger, Sandwich & Pizza
Clover Cafe & Bakery
30th Street, Bet:62nd & 63th Street, Mandalay, MM Chanayethazan
"Free delivery for orders over 8,000 Kyats. Applied to selected townships. Please check your delivery fees before you checkout"
Baked French Fries Cheese and Bacon (အာလူးချီစ်မီးဖုတ်ချောကလက်ဆော့စ်)
Double Cook Pork Belly and Rice(နံကင်ပြန်ချက်နှင့်ထမင်းဖြူ)
Crispy Pork Belly and Rice (နံကင်ထမင်းပေါင်းကော်ရည်)
Spaghetti Corned Beef Stroganoff (စပါကတီအမဲဘို့သားမှိုဆော့စ်)
Seafood Curry Coconut and Rice (ပင်လယ်စာအနှစ်ချက်နှင့်ထမင်းဖြူ)
Mini Burger On Top Bacon (မီနီဘာဂါဝက်ပေါင်ခြောက်)
Yangon Style Seabass and Rice (ရန်ကုန်စတိုင်လ်ကက္ကတစ်ငါးကြော်နှင့်ထမင်းပေါင်း)
Chicken Curry Parata (ကြက်သားဟင်းပလာတာ)
Fried Finger Fish (ငါးလက်ချေင်းကြော်)
Fish & Chip (ငါးသားပြားကြော်)
Fried Chicken Drum Stick (ကြက်ပေါင်ကြော်)
Stuffed Cheese and Chicken Ball (ကြက်သားလုံးချီစ်အစာသွပ်)
Corned Beef Quesadillas (အမဲဘို့သားဂျပါတီအစာသွပ်)
Fried Bacon On Toast (၀က်ပေါင်ခြောက်ပေါင်မုန့်ကပ်ကြော်)
Chicken Chipolita Sausage (ဂျာမန်ကြက်အူချောင်း)
Cheesy Garlic Bread (ချိစ်ကြက်သွန်ဖြူပေါင်မုန့်် မီးကင်)
Crispy Bacon With Mashed Potato(၀က်ပေါင်ခြောက်အကြွပ်နှင့်အာလူးထောင်း)
Fried Calamari(ကင်းမွန်ကြော်)
Clover Spaghetti Pizza with Seafood (ကလိုဗာစပါကတီပီဇာပင်လယ်စာ)
Bacon Sandwich with Spanich (၀က်ပေါင်ခြောက်ဟင်းနုနွယ်ဆန်းဒ၀ှစ်)
Tuna Sanadwich (တူနာဆန်းဒ၀ှစ်)
Cheesy Sandwich (ချီစ်ဆန်းဒ၀ှစ်)
Bolognese Pizza (အမဲသားကြေပီဇာ)
Bacon Pizza (၀က်ပေါင်ခြောက်ပီဇာ)
Seafood Pizza (ပယ်လယ်စာပီဇာ)
Fruit Pizza (သစ်သီးစုံပီဇာ)
Cheesy Croissant Hotdog (ခရော့ဆင့်ဟော့ဒေါ့)
Spaghetti Carbo (စပါကတီဝက်ပေါင်ခြောက်ခရင်မ်ဆော့စ်)
Spaghetti Seafood Aglio (ပင်လယ်စာဝိုင်ဖြူဆော့စ်သံလွင်ဆီစပါကတီ)
Thai Basil Spaghetti Spicy Sauce Seafood (ထိုင်းပင်စိမ်းစပါကတီအစပ်ကြော်နှင့်ပင်လယ်စာ)
Tom Yam Spaghetti Prawn (တုန်ယမ်းစပါကတီမြစ်ပုဇွန်)
Steam Prawn with Vermicelli (ပုဇွန်ပဲကြာဇံမြေအိုး)
Thai Green Curry Pasta Chicken (ထိုင်းစတိုင်အစိမ်းရောင်ကြက်သားစပါကတီ)
Clover Mini Steak (ကလိုဗာစတိတ်ငရုတ်ကောင်းဆော့စ်)
Pan Fried Dori Fish (ဗီယက်နမ်ငါးအိုးကပ်)
Assorted Mixed Grilled (အမွှေးကြိုင်အသားစုံကင်)
Seabass Lemon Butter Sauce (ကက္ကတစ်ထောပတ်သံပုရာဆော့စ်)
Corned Beef Stew With Corissant (အမဲဘို့ သားစတူးနှင့်ခရော့ ဆင့်ပေါင်မုန့် )
Grilled Sea Bass With Sour Cabbage (ကက္ကတစ်ငါးဝိုင်ဖြူဆော့စ်ဂေါ်ဖိကြော်)
Teriyaki Dori Fish (တာရီယာကီဆော့စ်နှင့်ဗီယက်နမ်ငါး)
Grilled Chicken Breast & Mushroom (ကြက်ရင်အုံကင်နှင့်မှိုဆော့စ်)
Corned Beef Red Wine (အမဲဘို့ သားဝိုင်နီဆော့စ်)
Corned Beef Honey (အမဲဘို့ သားပျားသံပုရာဆာ့စ်)
Salmon Steak (ဆယ်လမွန်စတိတ်နှင့်စပါကတီ)
Rosted Chicken and Herb Veggies (ကြက်ကင်နှင့်သီးစုံကြော်)
Cordon Blue (ဂေါ်ဒန်ဘလူးစတိုင်အစာသွပ်)
Nicoise Tuna Salad (တူနာငါးဆလပ်ရွက်သုပ်)
Crispy Pork Belly Salad (နံကင်ပြန်ကြော်သုပ်)
Pork Neck Salad (၀က်ဂုတ်သားကင်သုပ်)
Thai Style Minced Meat Salad (ထိုင်းစတိုင်အသားကြေဆန်လှော်သုပ်)
Whole Seabass Salad (ကက္ကတစ်ငါးကြော်သုပ်)
Glass Noodle Salad Seafood (ပင်လယ်စာပဲကြာဇံသုပ်)
Today Seasonal Vegetable (ယနေ့ရနိုင်သောအသီးအရွက်)
Eggplant Stew with Salted Fish (ခရမ်းသီးမြေအိုးငါးဘုတ်ခြောက်)
Spicy Octopus Salad (ရေဘ၀ဲချဉ်စပ်သုပ်)
Ear Mushroom Salad (ကြွက်နားရွက်မှိုသုပ်)
Pork Neck Gravy and Rice (ဂုတ်သားအနှစ်ချက်နှင့်ထမင်းဖြူ)
Pork Leg Stew and Rice (၀က်လက်စတူးထမင်းပေါင်း)
Corned Beef Stew Basil and Rice (အမဲဘို့သားစတူးပင်စိမ်းနှင့်ထမင်းဖြူ)
Steam Clay Pot with Salted Fish and Rice (ငါးဘုတ်ခြောက်မြေအိုးထမင်းပေါင်း)
Roast Chicken Butter Rice (ကြက်ကင်ထောပတ်ထမင်းဖြူ)
Beef Curry and Rice(အမဲသားဟင်းနှင့်ထမင်းဖြူ)
Thai Chicken Clay Pot and Rice (ထိုင်းလယ်သမားဟင်ရည်နှင့်ထမင်းဖြူ)
Khebab and Rice(ကဘတ်ကြော်နှင့်ထမင်းဖြူ)
Thai Fried Rice with Bacon (ထိုင်းစတိုင်ဝက်ပေါင်ခြောက်ထမင်းကြော်)
Tom Yum Fried Rice Prawn (တုန့်ယမ်းထမင်းကြော်ပုဇွန်)
Garlic Butter Rice Corned Beef (ကြက်သွန်ဖြူထောပတ်ထမင်းကြော်နှင့်အမဲဘို့သား)
Chinese Style Crabmeat Fried Rice (ဂဏန်းလက်မောင်းသားထမင်းကြော်)
Chef Fried Rice (အသားစုံရှယ်စားဖိုမှူးထမင်းကြော်)
Glass Noodle with "Cha Om" (ပဲကြာဇံဆူးပုတ်ရွက်ကြော်နှင့်ပုဇွန်)
Spain Fried Rice Prawn (စပိန်ထမင်းကြော်)
Seafood Hot Basil (ပင်လယ်စာပင်စိမ်း)
Double Cook Pork Belly (နံကင်ပြန်ချက်)
Steam Seabass Lime Sauce (ငါးသံပုရာပေါင်း)
Hot and Sour Seabass (ငါးကောင်လုံးချဉ်စပ်ကြော်)
Mongolian Hot Plate (အသားစုံမွန်ဂိုလီယန်စတိုင်ဟေ့ာပလိတ်)
Khebab (ကဘတ်ကြော်)
Pork Leg Stew (၀က်လက်စတူး)
Grilled Pork Neck (ဂုတ်သားကင်)
Golden Prawn (ရွှေရောင်ပုဇွန်ချက်)
Squid and Kailan (ပြည်ကြီးငါးကိုက်လန်)
Seafood Lime Sauce (ပင်လယ်စာအစုံသံပုရာပေါင်း)
Mushroom Cream Soup (မှိုခရင်မ်ဟင်းရည်)
Chicken Cream Soup (ကြက်သားခရင်မ်ဟင်းရည်)
Tom Yam Prawn (တုန်ရန်းပုဇွန်ချဉ်စပ်ဟင်းရည်)
Corned Beef Sour Bamboo Shoot (အမဲဘို့သားချဉ်စပ်ဟင်းရည်)
Corned Beef Soup Spaghetti (အမဲဘို့သားအီတလီခေါက်ဆွဲပြုတ်)
Crab Meat Soup (ဂဏန်းလက်မောင်းသားဟင်းရည်)
Chikcen Clay Pot (ကြက်သောက်ဆမ်းမြေအိုး)
Meat Ball Glass Noodle Soup (အသားလုံးပဲကြာဇံမှိုဟင်းရည်)
Mexcian Hot Fish Soup (မက်ဆီကန်ငါးဟင်းရည်)
White Clear Tom Yam Soup (ထိုင်းပင်လယ်စာချဉ်စပ်ဟင်းရည်)
White Coconut Milkshake
Green Apple Mojito Soda
Majestic Mango Soda
Super Berries Soda
Papaya Lime Juice